Ofufe ụbọchị: olile anya nke Eluigwe | EKPERE NA OZI
Nsọpụrụ ụbọchị: olile anya nke Eluigwe
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 31, 2020 Ọktoba 31, 2020
Olileanya nke Eluigwe. N’ime mkpagbu, na nsogbu n’agaghị aga n’ihu, ọ dịka nnuku anwụ na anwụ na-atọ ụtọ mgbe mmiri ozuzo zosịrị, echiche ahụ na Nna nke Elu-igwe n’echere anyị ebe ahụ n’ebe obibi ya mara mma, ihichapụ anyị anya mmiri n’onwe ya, ibuli anyị niile na-echegbu, ịkwụ anyị ụgwọ n’ụba obere ihe mgbu niile, tara ahụhụ maka ya, ma jiri okpueze ebighi ebi kpuchie anyị omume ọma anyị pere mpe. Gị onwe gị, ọ bụrụ na ịchọrọ, nwee ike iru ebe ahụ ...
Paradaịs. Ozugbo m banyere n’eluigwe, m ga-a beụrị ọ ...ụ ... Kedu echiche! Ugbu a, achọrọ m inwe obi ụtọ, m na-agbaso ya, ọ dịghị mgbe m ga-enweta ya; N’eluigwe aga m enweta ya zuru oke, ruokwa mgbe ebighi ebi ... Lee ọ joyụ! N'etiti ọtụtụ ndị Senti, dịka Mmụọ ozi kwa, n'ihu Meri, nke Jizọs meriri, m ga-ahụ Chineke n'ịdị ebube ya na ịma mma ya; M ga-ahụ ya n'anya, m ga-enweta akụ ya, m ga-abụ akụkụ nke obi ụtọ Ya ... Lee ebube! Achọrọ m iru ebe ahụ n'agbanyeghị ụgwọ ọ bụla.
Eluigwe dị n'aka anyị. Onye-nwe-ayi emeghi ka onye ọ bula kọcha ya: ọ chọrọ ka a zọpụta mmadụ niile, ka Paul Paul kwuru; ndu na onwu ebighebi ka etinyeri n’aka m; ma ọ bụrụ na ị chọrọ, kwuru, sị St. Augustine, Heaven bụ nke gị. E jighi ego azụta ya, ọbụghị ya na sayensị, ma ọbụghị nsọpụrụ; mana were uche, so ezi ọrụ ra. Dika otutu ha choro, onye obula nwetara ya. You chọrọ ya n'eziokwu na n'ezoghị ọnụ? I chere na ọrụ gị bụ maka Eluigwe? Chee echiche, ma dozie.
OMUME. - Gụọrọ Salina Regina nke Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke, na Pater atọ na Ndị Nsọ niile, iji nweta Eluigwe.
Nke gara aga Post Gara aga post:Uzo asaa iji gua Akwukwo Nso ma zute Chineke
Next Post → Post ozo:Onye isi ụka nke Setan kpughere otu oriri Halloween "ụbọchị ọmụmụ nke ekwensu"